Fanirisoa Ernaivo : Hiandany amina gadra nandositra? -
AccueilRaharaham-pirenenaFanirisoa Ernaivo : Hiandany amina gadra nandositra?
12/02/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nandositra ny fonja ny faha-28 Desambra 2017 ilay teratany alzeriana mizaka zom-pirenena frantsay antsoina hoe Houcine Arfa, voampanga ho nikasa haka an-keriny, nitàna fitaovam-piadiana mahery vaika, nisandoka andraikitra, izay nofonjaina teny Tsiafahy ary nafindra tetsy Antanimora noho ny antony ara-pahasalamana. Gadra nandositra tahaka ireny jiolahy karohana rehetra ireny araka izany i Houcine Arfa nanomboka tamin’io fotoana io ary efa namoahana didy fisamborana maneran-tany, karohan’ny Fitsarana frantsay rahateo koa amin’izao fotoana.
Nitory ny lehiben’ny Fampanoavana ary ireo mpitsara mpanao famotorana izay namoaka ny didy nampiditra am-ponja ny tenany any Frantsa i Houcine Arfa ny faha-7 Febroary 2018, tamin’ny alalan’ny mpisolovavany.
Mitodika avy hatrany any amin’ny filohan’ny SMM, Fanirisoa Ernaivo, ny mason’ny mpanara-baovao ary mametraka ny fanontaniana hoe: “hiandany amin’i Houcine Arfa, gadra nandositra ve i Fanirisoa Ernaivo sa hijoro hiaro ny fiandrianan’ny Fitsarana Malagasy sy ny Fianakaviamben’ny Mpitsara?
Ilay fiandrianan’ny Fitsarana Malagasy mihitsy mantsy izao no voatohintohina; gadra mandositra indray ve no lasa mitory ny lehiben’ny Fampanoavana sy ny mpitsara mpanao famotorana ary eo indrindra no hametrahana fanontaniana amin’ny filohan’ny SMM ny amin’izay fanapahan-kevitra horaisiny.
Mizotra araka ny tokony ny fiaraha-miasa eo amin’ny Fitsarana Malagasy sy Frantsay. Miankina amin’ny roa tonta araka izany ny fanomezana tohiny na tsia io fitoriana napetraky ny mpisolovava an’i Houcine io. Voalaza ao anatin’ny fifanarahana eo amin’ny Fitsarana Malagasy sy Frantsay far aha misy iray mandà na mitsipaka dia tsy manan-kery izany.
Misy fanamarihana mampiahiahy anefa momba ity Houcine Arfa ity ankehitriny. Voalohany, nahoana no mivantana any amin’ny hainoamanjerin’ny fanoherana ny dika mitovy tamin’ilay fitoriana izay nataon’ny mpisolovavany? Faharoa, mpisolovava malaza amin’ny fiarovana terorista toa an’i Saleh Abdeslam (tompon’antoka tamin’ilay asa fampihorohoroana nahafaty olona miisa 130 ny faha-13 Novambra 2015) ireto miaro azy ireto. Moa va iray fonosana amin’ireo mpampihorohoro ihany koa ny tenany? Fahatelo manaraka izany, avy aiza ny famatsiam-bola hanakaraman’i Houcine Arfa ireo mpisolovava, ny sampan-draharahan-tserasera matanjaka izay tena lafo tokoa kanefa tsy manana izany ho enti-manana izany ny tenany raha fahafantarana azy.
Raha ireo fanamarihana roa voalaza ireo no dinihana dia toa karazan’ny mitolo-batana daholo ihany ankehitriny na i Houcine Arfa, ireo mpamatsy ara-bola ary ny hainoamanjery mpivoy ity resaka ity ary manaporofo indray koa fa paikady nomanina mialoha nentina nanakorontanana firenena mba tsy hilazana hoe fanonganam-panjakana mihitsy. Mbola miverina any amin’ny filohan’ny SMM hatrany ny adihevitra manoloana izany rehetra izany: hiaro ny voninahitry ny Fitsarana Malagasy sy ny Fianakaviamben’ny Mpitsara ve ny tenany sa hiandany amina gadra nandositra izay voaporofo mihitsy izao fa nanana fikasàn-dratsy teto amin’ny firenena?
Niaraka tamin’ny sekretera jeneralin’ny Frankôfônia Michaëlle Jean. Nitarika ny fakan-kevitra tamin’ireo minisitry ny raharaham-bahiny avy amin’ireo firenena mikambana ao anatin’ny Frankôfônia, ny minisitry ny raharaham-bahiny Malagasy, Henry Rabary-Njaka izay sady filoha amperin’asan’ny « Conférence ministérielle de ...Tohiny
Fampiasana ny “Riz hybride” : Hampitombo avo telo heny ny voka-bary